स्वर्गीय पत्रकार चौधरीको छोराछोरीको खातामा तीन लाख सङ्कलन – Sulsule
सुलसुले २०७७ कात्तिक २४ गते ११:२६ मा प्रकाशित
सिरहाका स्वर्गीय पत्रकार कृष्णमोहन चौधरीका सन्तानको भविष्यका लागि युवाहरुले स्थापना गरेको खातामा रु. तीन लाखभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिरहाका सचिव रोयण्टर मण्डलको पहलमा स्वर्गीय पत्रकार चौधरीका छोराछोरीको अध्ययनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सुखीपुर शाखामा खोलेको चुन्नामुना खातामा रु. तीन लाख २० हजार रकम जम्मा भएको हो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सिरहाका सदस्य युवा पत्रकार चौधरीको यही कात्तिक ११ गते धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
नसासम्बन्धी रोगबाट पीडित सिरहाको सुखीपुर नगरपालिका–८ निवासी ३५ वर्षीय पत्रकार चौधरीको मृत्यु भएपछि उहाँका श्रीमती, दुई छोरा र एक छोरीको बिच्चली भएको छ ।
कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि सिरहाको लहानस्थित फ्रेन्ड्स मोडेल अस्पताल सिल गरिएको छ । अस्पतालमा कार्यरत ३० वर्षीया ल्याब टेक्निसियन र अर्का २८ वर्षीय स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि अस्पताल सिल गरिएको राससले जनाएको छ ।
यही कात्तिक १९ गते लहान नगरपालिकाले ४० जनाको निःशुल्क स्वाब सङ्कलन गरी पिसीआर परीक्षण गर्दा अस्पतालका दुई स्वास्थ्यकर्मीसहित २० जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएका नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामसुन्दर यादवले जानकारी दिए ।
सङ्क्रमित सबै होम आइसोलेसनमा रहेको जनाइएको छ । सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरुको सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य भइरहेको प्रमुख यादवले बताए।
सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–१ सिनुरियामा गए राति आगलागी हुँदा रु १५ लाखभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
विद्युत् चुहावट भई आगलागी हुँदा स्थानीय श्रीप्रसाद साह र पशुपति साहको पाँच वटा घर, घरमा रहेको सुनचाँदीको गरगहना, अन्नपात, फर्निचरलगायतका समान जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
लहान नगरपालिकाबाट गएको वारुणयन्त्र, प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा आएको जनाइएको छ ।